Dawladda Turkiga oo Shaacisay Muhiimadda ay ka Leedahay Dhex- dhexaadinta Somaliland iyo Somalia | Burco Media
Ankara (BM)- Wasiirka Arrimaha Dibedda Waddana Turkiga, Ahmet Davutoğlu ayaa sheegay in dalkiisu sii wadi doono dhisitaanka xidhiidh adag oo Somaliland iyo Soomaaliya ay la yeeshaan.
Wasiirka Arrimaha Dibedda oo shalay kulan la yeeshay ergooyinka Somaliland iyo Soomaliya u metelaya wada-xaajood shalay uga furmay Ankara oo Saddex maalmood, ayaa sheegay inaanay taageerada ay labada waddan u hayaan ku koobnaan doonin wada-xaajoodka balse ay sidoo kale taageeradooda ku darsanayaan dhinacyada mucaawimooyinka labada dal. “Culays kasta oo hawsha noo taal tahay, ujeeddada Turkigu waa inay hawshooda ku darsadaan wada xaajoodka Somaliland iyo Soomaaliya iyo dhistaanka xidhiidh adag oo dhexmara Somaliland iyo Soomaaliya loona marayo dhinaca mucaawinooyinka,” ayuu yidhi Davutoğlu.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Turkiga ayaa sidoo kale ku tilmaamay taageerada dalkiisu siiyo Soomaalida uu yahay masuuliyadda xidhiidhka taariikheed oo u dhexeeya, “Iyadoo aan la eegayn dalka ay ku nool yihiin, waxaa u taageeri doonaa walaalahayaga Soomaalida rag iyo dumar si kasta. Taasi waa masuulidayada taariikheed iyo muhiimadayada hadafka diblomaasiyadeed aan ka leenahay Afrika,” ayuu yidhi, waxaanu intaas ku daray, “Xidhiidhka u dhexeeya Somaliland, Soomaaliya iyo Turkiga waa mid ka fog xuduudo kasta. Inkastoo dhulalkoodu kala fog yihiin, taariikhiyan, waxaan nahay walaalo.”
Madaxweynayaasha Somaliland, Axmed M. Siilanyo iyo Soomaliya Xasan Sh. Maxamuud ayaa wejigii koowaad ee wda-hadallada kulan saddex geesood ay u qabteen masuuliyinta dalka Turkigu, ka dib markii labada dhinac codsadeen, waxaana wejigaas hore ee wada-hadallada layskula qaatay qodobbo heshiis oo lagu sii amba-qaadayo wada-hadallada wejigooda labaad ee shalay furmay.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Turkiga oo ka hadlayey muhiimadda kulankaa koowaad oo qabsoomay 13-kii April ee sannadkan, ayaa ku tilmaamay inuu ahaa Bilow taariikhi ah oo labada dhinac ku kala saxeexdeen Qoraalkii Ankara oo lagu caddeeyey doonistooda sii-waditaanka wada-xaajoodka uu martigeliyey dalka Turkigu.